I-Azimuth, ukuphakama, nokuqonda. Funda ukukala izinkanyezi esibhakabhakeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kakhulu ngokubukwa kwe- izinkanyezi Njengasesibhakabhakeni ebusuku ngokujwayelekile kanye nokwenziwa kwezithombe ezisezingeni eliphakeme, kubalulekile ukwazi imiqondo ye- azimuth nokuphakama. Lokho kuyisihloko seposi. Kufanele wazi ukuthi yini i-azimuth nokuthi yenzelwe ini ukuze uthole okuningi ezithombeni lapho ungabona khona iLanga nenyanga ngasikhathi sinye noma ukuthola izinkanyezi ezithile esibhakabhakeni.
Kulokhu okuthunyelwe sikufundisa konke mayelana ne-azimuth nokuthi ungayisebenzisa kanjani.
1 Yini i-azimuth?
2 Kuyini ukuphakama?
3 I-Azimuth futhi ethwala ngesimo sendawo
4 Izinsimbi zokulinganisa
Kokubili i-azimuth nokuphakama kuyizixhumanisi ezimbili ezigxile kuko chaza ukuma kwendikimba esezulwini esibhakabhakeni lapho siyibuka sisendaweni ethile futhi ngesikhathi esithile. Lokhu kusho ukuthi, kusetshenziselwa ukwazi ukwazi isikhundla iLanga, inyanga noma enye inkanyezi ezoba naso nganoma yisiphi isikhathi, kuya ngesikhundla esikuso. Uma sifuna, ngokwesibonelo, ukubona ngeso lengqondo enye inkanyezi esibhakabhakeni efana ne- IBhele Elikhulu singabheka izinkanyezi ezithile ezisivumela ukuthi sizithole. Ukwenza lokhu, sisebenzisa ukuphakama ne-azimuth.
Abathwebuli bezithombe abaningi basebenzisa lezi zixhumanisi ukuthola ukuma kwenyanga emini bebanzi futhi bathathe izithombe ezingakholakali zombili zezinto ezisemkhathini ngesikhathi esisodwa. Ukuma kweLanga neNyanga esibhakabhakeni kuchazwa yi-azimuth nokuphakama.
I-Azimuth ayilutho ngaphandle kwe-engela eyenziwa yinoma imuphi umzimba wasenyakatho neNyakatho. Leli engeli likalwa lisuka ohlangothini lwewashi futhi lizungeze umkhathizwe wesibukeli. Ngakho-ke, isimo esizithola sikuso sibalulekile ukuze sinqume isikhundla somzimba wasezulwini. Lezi zixhumanisi azinqumi ukuqondiswa komzimba wasezulwini. Uma silinganise umzimba wasezulwini osenyakatho, sizobona ukuthi ine-azimuth ka-0 °, eyodwa ukuya eMpumalanga 90 °, eyodwa eningizimu 180 ° kanti eNtshonalanga 270 °.
Kunezinhlelo zokusebenza zeselula ezigcina imininingwane mayelana nokuphakama ne-azimuth yelanga nenyanga ngezinsuku nezikhathi ezahlukahlukene esifuna ukuzibona. Imvamisa imelelwa yimephu ye-azimuth nolayini bokuphakama ngesikhathi.
Uma sikhuluma ngokuphakama, sisuke sibhekise ebangeni eliqondile elime mpo phakathi kwendikimba yesibhakabhaka okukhulunywa ngayo kanye nebala lomkhathi elibonayo. TO lokhu kubizwa ngendiza yokubuka yendawo. Kumqapheli osemazingeni aphansi komhlaba, ukuphakama kweLanga kwakha i-engeli eyakha ukuqondiswa kwesikhungo salo sejometri nomkhathizwe esiwubonayo kuleso sikhundla.
Isibonelo, ukuphakama kweLanga noma iNyanga kungaba yi-12 ° lapho isikhungo sayo sejiyometri sise-12 ° ngaphezu kwesibhakabhaka esikubona kusukela lapho sikhona. Uma ufuna ukuthwebula lokhu, kufanele ucabangele ukuma kweLanga noma inyanga futhi kufanele ubale ukuphakama. Kulezi zinhlobo zezithombe, lesi yisinyathelo esinzima kakhulu. Ukufunda ukuphatha imiqondo ye-azimuth nokuphakama kungcono ukubona izifundo zezibonelo zangempela.
I-Azimuth futhi ethwala ngesimo sendawo
Okunye ukusetshenziswa kwale mibono okusetshenzisiwe emhlabeni we-topography kanye ne-geodesy. Inkambo yilokho okukhona izinyathelo ezisuka enyakatho noma eningizimu nangewashi noma ngokuphikisana newashi. Noma kunjalo, ingalinganiswa kuze kufike ku-90 °.
Kokubili ukuzala ne-azimuth kuhlobene kakhulu kulo mkhakha wokufunda. Umehluko wale mibono ungabonakala ngokuthi i-azimuth yomugqa ingabalwa kuphela ngokwazi ukuthwala, kepha hhayi okuphambene nalokho.
Ungazama ukuthola inani lomugqa ojoyina noma yimaphi amaphuzu amabili, inqobo nje uma sikwazi izixhumanisi zasenyakatho nasempumalanga. Kukhona ifomula uma nje i-azimuth ikwi-quadrant yokuqala:
Kule fomula, i-Delta ngumehluko phakathi kwezixhumanisi zaseMpumalanga yendawo yokufika kanye neMpumalanga yendawo yokuqala. Njalo kufanele ucabangele isikhundla se-quadrant lapho i-azimuth ikhona.
I-quadrant ne-crossbow yizinsimbi ezimbili ezisetshenziselwa ukubuka izinkanyezi esibhakabhakeni. I-quadrant isetshenziselwa ukubala ukuphakama kwezinkanyezi emkhathizwe. Uma sifuna ukwazi ukuthi iLanga liphakeme kangakanani, kufanele siqaphele ukuthi singalibheki ngqo noma sizolimaza amehlo ethu.
Uma ugxila ku-quadrant eya eLangeni, ungabona ukuthi imisebe yokukhanya izongena kanjani kuyo futhi ivezwe. Yilapho-ke wazi khona ukuthi kuhambisane kahle naye. Uma sezenziwe zaqondaniswa, senza ukufundwa ku-quadrant futhi lokho ukuphakama kweLanga ngaphezu komkhathizwe.
Futhi kuthiwani uma kungekho ukukhanya kwelanga okungena ku-quadrant? Akukho okwenzekayo. Ebusuku ingasetshenziselwa ukuthola inkanyezi futhi wazi ukuphakama kwayo. Inqubo efanayo iyalandelwa, kepha kulokhu uzokwazi ukubheka ngqo inkanyezi, uyiqondise futhi ubheke i-quadrant ukuthola ukuphakama kwayo.
Ngakolunye uhlangothi, ukwazi ibanga le-angular phakathi kwezinkanyezi ezimbili, kusetshenziswa i-crossbow. Kufanele ubeke isiphambano ngaphezulu kwekhanda lakho, ubeke induku eceleni kwekhala. Sibeka umsuka wombusi enkanyezini esifuna ukuyibona ngeso lengqondo futhi sizobala inani lezigaba ezikhona size sifinyelele kwenye inkanyezi esifuna ukuyikala. Le nombolo esiyizuzile kuzoba ngamazinga okuhlukana phakathi kwalokhu okubili.
Njengoba ukwazi ukubona, imiqondo efana ne-azimuth, ukuphakama, nesihloko kubaluleke kakhulu ukukala izinto ezingafinyeleleki. Kuyizilinganiso ezinemba eliphezulu zokucacisa futhi zinemikhakha eminingi ewusizo kwizayensi ezahlukahlukene, kusuka ebuningini bomhlaba kuya ekubukekeni kwezinkanyezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » I-Azimut